Ardey Soomaaliyeed oo deeqo waxbarasho la gudoonsiiyay gobolka Ohio-Sawirro – Radio Muqdisho
Ardey Soomaaliyeed oo deeqo waxbarasho la gudoonsiiyay gobolka Ohio-Sawirro
Sanad walba xilligan oo kale waxaa magaalada Columbus Ohio ee dalkan Mareykanka lagu qabtaa xaflad loogu talo galay ardada dhamaysatay dugsiyada Sare iyo kuliyadaha kala geddisan ee gobolka Ohio.
Xafladdan oo ay qeybaha bulashada, madaxda gobolka iyo ardada intuba ka soo qeybgalaan waxaa soo abaabulay isla markaana soo waday mudo 7 sano ah Hay’ada SomaliCAN, oo ah hay’ad u adeegta bulshada, waxaana laf dhabar u ah Prof. Jibril Mohamed iyo Wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Dr. Abdinur Sh. Mohamed.
Waxaa goobta ka hadlay madaxda dowladda hoose, gobolka iyo heer qaran, Cabdikhayr Soofe oo ah xiriiriyaha xafiiska duqa magaalada iyo jaaliyadaha dalka ku cusub.
Doorka waliidiinta Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamay mid aan qarsoomi karin iyada oo loo mahad celiyay waalid walba oo ubadkiisa gaarsiiyay meel uu ka sii socon karo. Khadra Maxamed oo madax ka ah ururka haweenka Soomaaliyeed ee Ohio iyo weliba isutagga ururrada Afrika ee Ohio ayaa u mahadcelisay waaliddiinta una hambalyaysay ardada.
Sanadkan waxaa abaalmarin la gudoonsiiyay 13 Arday oo kala ahaa lix wiil iyo toddobo gabdhood. 12 ka mid ah waxaa la guddoonsiiyay deeqo waxbarasho oo qaab bakhtiyaa nasiib ah lagu xulay halka hal gabar ay ku guulaysatay abaalmarin ka sareeysa mida ardayda kale la gudoonsiiyay, gabadhaas oo ku soo baxday ardaygii ugu sareeyay sanadkan dhanka waxbarashada, waana Amal Cabdi.
Amal Cabdi waxa ay ka soo baxday Dugsiga: Westland High School, waxaa oggolaansho iyo deeq waxbarasho siiyay in ka badan 10 jaamacadood oo ay ka mid yihiin jaamacadaha heerka sare ee “Ivy Leage” sida Harvard, Yale, Dartmouth, Columbia iyo Cornell. Amal xagaagan ayay billaabaysaa jaamacadda Harvard University.
Waxaa iyana deeqo waxbarasho helay Ardayda kala ah
Omar Ibrahim, Pickerington High School
Maryan Liban, Columbus Alternative High School
Abdigani Ahmed, Dublin Coffman High School
Ali Osman, Westerville South High School
Khalid Mohamed, Metro Early College High School
Habibo Barre, Westerville North High School
Abdikarim Mohamud, Gahanna Lincoln High School
Safiyo Mohamud, Columbus Alternative High School
Ahmed Yacoob, Central Crossing High School
Ridwaan Mohamed Koriyow, Westerville North High School
Firdowsa Hashi, Horizon Science Academy
Nimo Suleyman, Westerville South High School
Xafladda qalinjebinta ayaa ku soo dhammaatay farxad iyo rayrayn iyada oo waaliddiinta iyo madaxda bulshadu hambalyo iyo bogaadin u jeediyeen ardada ku guulaysatay deeqaha waxbarasho iyo dhammaan ardada ka baxday dugsiyada sare iyo jaamacadaha Ohio sannadkan 2016.
W/D: Deeqa sonna
Wasiirka Waxbarasahda Xukuumadda Soomaaliya oo kormeeray goobaha lagu Saxayo Imtixaanka Dugisyada Sare